Akwụkwọ ikike Ngaghari/Kọmitii Ndepụta - Meta
Akwụkwọ ikike Ngaghari/Kọmitii Ndepụta
This page is a translated version of the page Movement Charter/Drafting Committee and the translation is 67% complete.
Kọmitii Na-edepụta Akwụkwọ ikike Ngagharị nke bụ Movement Charter Drafting Committee ga-emepụta akwụkwọ ga-akwado Ngagharị Wikimedia n'ịrụkọ ọrụ na Strategic Direction. Ọrụ kọmitii a bụ idepụta Akwụkwọ ikike Ngagharị na-eso atụmatụ Mkpebi rụrụ eru”. Ọrụ a gụnyekwara nyocha na ndụmọdụ ndị obodo, ndị ọkachamara na ndị otu. Usoro ikpeazụ ga-emecha nweta nkwenye site na nkwado Ngagharị Wikimedia.
E hiwere kọmitii a na 1 Nọvemba 2021 site na nchikota ntuli aka na ụzọ nhọrọ ndị ọzọ. A na-atụ anya na kọmitii a ga na-arụ ọrụ ruo mgbe a kwadoro Movement Charter, nke amụma usoro iheomume ugbu a na ngwụcha 2023. Otu a gụnyere ndị otu 15 sitere na oru ngo, ndị mmekọ na Wikimedia Foundation. Maka nkọwa ndị ọzọ, lelee Drafting Committee matrices. Dịka nkwekọrịta mbụ siri dị, Ndị otu nwere ike ịnata ikike iji mebie ụgwọ nsonye. Ọ bụ US$100 kwa ọnwa abụọ.
3 Ndị otu
Movement Charter Drafing Committee ga-ebipụta opekata mpe otu mmelite na ma ọ bụ gburugburu ụbọchị nke isii nke ọnwa ọ bụla. Mmelite ndị ahụ na-enye nchịkọta dị mkpirikpi nke ọrụ Kọmitii otu ugboro n'ọnwa. Ọzọkwa, a ga-enwe akwụkwọ akụkọ nke ndị ọrụ nwere ike ịdenye aha ma nata ọkwa banyere ihe omume dị mkpa, oku maka nzaghachi na ndụmọdụ nke Kọmitii na-ahazi.
Lelee mmelite kwa ọnwa
[Na-abịa ngwa ngwa!] Debanye aha na akwụkwọ akụkọ Movement Charter
Ọrụ kọmitii Movement Charter Drafting chọrọ nhazi dị n'ime ya doro anya. Ndepụta dị n'okpuru nwere akwụkwọ nke ugbua a na nke ga-eme n'ọdịnihu nke e bu n'obi kọwaa otú kọmitii sị arụ ọrụ
Nkọwa dị mkpirikpi
Janụwari 2022 Ụkpụrụ Kọmiti Nhazi Akwụkwọ ahụ na-akọwa ụkpụrụ ndị ga-eduzi ọrụ Drafting Kọmitii n'ọdịnihu. Dịka ọmụmaatụ, ọ gụnyere:Ọrụ na iwu kọmitii a, mmekọrịta ya na obodo na otu Wikimedia, tinyere ihe ndị ọzọ.
Iji kpebisie ike 2022 Mkpebi ime Akwụkwọ a kọwara otú ndị kọmitii na-edepụta akwụkwọ si eme mkpebi n'etiti onwe ha.
Ndepụta ndị otu a ka na-enyocha (dabere na ọkwa ndị ọchịchị, 2021-11-01):
Anass Sedrati (Anass Sedrati) Kọmitii nkwurịta okwu
Research sub-committee Ana m arụsi ọrụ ike na ọrụ Wikimedia kemgbe 2013. Ana m edezi Wikipedia n'asụsụ dị iche iche, ma tinye aka n'iwepụta ụdị ọhụrụ n'asụsụ ndị na-enweghị akụrụngwa. Abụ m onye nchoputa nke Wikimedia Morocco User Group (onye otu Bọọdụ), Ndị Wikimedia nke otu ndị ọrụ Tamazight, na Ndị ọrụ Wikimedians Arab. Etinyere m aka n'ọrụ na atụmatụ dị iche iche,gụnyere ịbụ onye otu Wikimedia 2030 na-arụ ọrụ (nkwado), njikọ atụmatụ maka asụsụ Arabic (WMF - onye ọrụ ngo), onye so na otu mgbanwe imewe, na onye otu ndi njikọ, na-etinye aka na ide ndụmọdụ ikpeazụ nke 2030.
Summit sub-committee Abịara m n'ọrụ a nwere ahụmịhe dị iche iche. N'ọrụ nke m (Wikipedia Bekee), abụ m onye nchịkwa, CheckUser na onye nlekọta. M bụbu onye so na kọmitii Arbitration (Mkpegharị ikpe) rụọ afọ ise. Abụkwa m onye otu ndị Volunteer Response Team. Ahụmahụ m zuru ụwa ọnụ gụnyere ịbụ onye so na Kọmitii Nkwukọrịta Wikimedia ugbu a; onye bụbu onye so na kọmitii Mgbasa Ego;yana ịno na otu ndi Roles & Responsibilities Strategy 2030. Emere m mmemme Kọmitii ntuli aka maka ntuli aka Wikimedia Foundation nke afọ 2013.
Ciell (Ciell) Kọmitii nzikọrịta ozi
Summit sub-committee M sụrụ ngọngọ na Wikipedia na 2006 ka m gachara njem na New Zealand na Cook Islands, ọ masịrị m ịkesa foto m nke ukwuu. Ugbu a enwere m ikike nchịkwa n'ọtụtụ oru ngo (nl-wp, pap-wp, Commons), abụ m onye nnọchi anya VRT (nke bụbu OTRS), yana onye nchịkwa Central Notice na Meta. M na-etinyekwa aka n'ọtụtụ ọrụ ngo dị ka Gender Gap, Wiki Loves Monuments mba ụwa, na European lobby, ha niile na mmekorita na- ma anọghị n'ịntanetị.
Érica Azzellini (EricaAzzellini) Kọmitii nkwurịta okwu
Summit sub-committee Ahụrụ m Wikimedia n'anya site na mmemme mmụta mgbe m bụ nwa akwụkwọ nkwurịta okwu na-elekọta mmadụ. Amalitere m ịhazi edit-a-thon iji gboo ọdịiche dị na okike na Wikipedia. Aburu m onye Wikimedian na ebe obibi, wee mepụta Ngwa Mbabel. Abụ m onye njikọ Wiki Movimento Brasil. N'ikike ọkachamara m, a na m arụ ọrụ dị ka onye njikwa nkwukọrịta maka ndị mmekọ, nke pụtara na m na-etinye aka na nkwado obodo na ndụmọdụ, iwulite mmekọrịta na mgbasa ozi Wikimedia. M na-edugakwa mmepe nke atụmatụ WMB nke dabere na ndụmọdụ Movement Stragegy. Abụ m onye ndu maka ndị otu Brazil na-ahazi WikidataCon n'afọ a.
Georges Fodouop (Geugeor) Research sub-committee Abụ m onye otu na-arụsi ọrụ ike na onye nchoputa Wikimedians nke Cameroon User Group. Enyere m aka na ọrụ Wikimedia kemgbe 2013. N'ime afọ ndị a niile, ahaziela m ọtụtụ ọrụ: Wiki hụrụ ụmụ nwanyị n'anya bu Wiki Loves Women, dị ka Wikimedian n'ụlọ, Wiki hụrụ Africa n'anya bu Wiki Loves Africa, Wiki Hụrụ Ụwa n'Anya bu Wiki Loves Earth, Afripedia, ọrụ WikiChallenge Ecoles d'Afrique. Abụ m onye otu Wiscom (WikiIndaba Steering Committee); Onye nnọchi anya 1Lib1Ref maka mba ndị na-asụ French. Abụ m onye otu na-ahụ maka inye onyinye (Microfi) nke Wikimedia France. Enyerekwa m aka na nhazi nke multiple strategic salons nke enyerela anyị aka itinye aka anyị dị obi umeala na Strategy Movement. Onye otu bọọdụ na odeakwụkwọ WikiFranca, kemgbe Nọvemba 2021.
Onye otu Bọọdụ Wikimedia Taiwan (2016.03 - rụọ ugbu a)
Onye isi Wikipedia nke ọnwa Asia (2019.09 - rụọ ugbu a)
Onye ntụgharị okwu na onye ntụgharị asụsụ China maka mmegharị Wikimedia (2017.09 - rụọ ugbu a)
Onye otu ndi otu ahụike obodo maka Wikimedia 2030 (2018.11 - 2019.12)
Onye otu kọmitii mmemme nke ọgbakọ ESEAP (2018 2017.08 - 2018.05)
Onye njikwa ọrụ nke Taiwan WikiProject Med (2016.03 - 2019.06)
Jorge Vargas (JVargas WMF) M sonyeere Wikimedia Foundation na Septemba 2013, na-enye m ohere ijikọ na Movement na ọtụtụ forums ma ọdịdị ala n'ọtụtụ ohere. Na ọrụ m na Foundation's Partnership Team (nke mbụ na-elekwasị anya na Latin America, ma ugbu a na-eduzi ndị ọrụ nchịkwa mpaghara maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ ise), enwere m ohere izute ma soro ndị mmekọ na ndị isi na-arụ ọrụ n'ụwa nile, ma ghọtakwuo nke ọma karịsịa mkpa nke ndị na-abụghị United States na Europe
Buckets sub-committee Amalitere dị ka onye nchịkọta akụkọ na Punjabi Wikipedia na-emepụta ọdịnaya gbasara Sayensị Forensic. E mesịa gbasaa gaa na Hindi. Dị ka onye nkuzi na Mahadum, etinyere m ụmụ akwụkwọ m aka, malite ime atụmatụ, ihe omume & ghọta ọchịchọ m maka mgbasa ozi & ntinye aka, emesia kwagara n'ichepụta mmemme, atumatu na iwulite mmekorita nke ulo oru na nkwado nke ndi otu ndi ozo na India. Ụfọdụ mmemme haziri na mmekorita ya na ndị wikimedia ibe na mpaghara obodo bụ- WikiConference India 2016, Strategy Salon Patiala, 2017, Ụmụ nwanyị TTT 2019, WikiGap 2019, mmekọrịta Armenia-India/2019, Wiki4Women 2020, Syberthon 2020, WikiGap-Wiki4Women 2021 (India).
pl.wiki, en.wiki onye mmezi akụkọ kemgbe 2004
onye nchịkwa pl.wiki kemgbe 2005, onye ntụgharị, Wikimedia Polska kemgbe 2006, onye otu pl.wiki ArbCom mbụ.
Na 2012-2018 osote onye isi, kemgbe 2018 onyeisi oche nke Wikimedia Poland,ihe ịtụnanya, ọmarịcha isi ọrụ na-arụ ọrụ na akwadokwa n'efu, GLAM, agụmakwụkwọ, na ndị ọzọ.
Pepe Flores (Padaguan) Research sub-committee Abụrụla m onye otu bọọdụ Wikimedia Mexico kemgbe afọ 2013. Abụ m onye isi ugbu a kemgbe Septemba 2021. Abụ m onye nhazi Wikimania 2015, ma nọchite anya WMMX na Wikimedia Conference (2015, 2016), WikiConference North America (2016, 2019) na Wikimania (2015, 2019).
Isi ihe m na-eme na Wikimedia Mexico gbadoro ụkwụ na atụmatụ, mgbasa ozi, nzikọrịta ozi, nkwado, ihe gbasara mpaghara, na iwu obodo. Dịka onye na-akwado ikike dijitalụ, ana m etinye aka na mkparịta ụka amụma gbasara nzuzo, nnwere onwe ikwu okwu, na omenala nweere onwe.
Ravan J Al-Taie (Ravan) Kọmitii nkwurịta okwu N'ime afọ 13 gara aga, enwetala m ahụmịhe sara mbara na dị iche iche na ọrụ Wikimedia dị iche iche dịka onye ọrụ afọ ofufo, onye nchịkwa, onye otu AffCom na nso nso a, á bu m onye ọrụ nkwekọrịta ọkara oge. Enwere m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndezi 19,000 yana ihe dị ka akụkọ 850 nke m mepụtara ma tụgharịa.
E guzobere m otu ndị ọrụ Wikimedians Iraq na 2015, otu ndị ọrụ mbụ na Iraq. A so na ndi hiwere Asọmpi Wikiwomen Prize n'afọ 2015. Emepụtara m ma jikwaa mbipụta na nkuzi dị iche iche, yana nyere aka ihiwe Sorani Kurdish User otu. M haziri asọmpi WLM maka Iraq rụọ afọ atọ.
Preamble & Values sub-committee Onye guzobere Wikimedians nke Tamazight UG na Wikimedia Community of Saint Petersburg User Group (onye otu Bọọdụ), onye otu WikiIndaba Steering Committee, onye nnọchite anya mmekọ na WikiFranca, onye otu kọmitii inye onyinye nke Central na Eastern Europe na Central Asia, onye bụbu onye Wikimedia Algeria na AffCom. Onye otu obodo na-arụsi ọrụ ike kemgbe 2010. M na-asụ Russian, French, Darija, Arabic, Tacawit, na-arụkwa ọrụ na Bekee. Arụla m ọrụ maka mmepe Tamazight, na 2019 a malitere m usoro okike nke Tacawit Wiktionary (obodo asụsụ mbụ chọtara onwe ha na ọrụ na-abụghị Wikipedia).
Buckets sub-committee Mgbe mmalite ụgha laghachi azụ na 2012, adara m n'ime oghere oke na 2018 ma na-arụsi ọrụ ike kemgbe. A na m arụsi ọrụ ike na onye ọrụ nzaghachi OTRS (ugbu a VRT), na-arụ ọrụ na ndị na-enweghị ahụmịhe Wikimedia. Aburu m onye nchịkwa en-wiki na 2019, nke bụkwa n'oge nke m na-arụsi ọrụ ike na akụkụ Strategy nke mmegharị ahụ. Nke a esitela na nsonye n'akụkụ ọ bụla nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ntụnye ọ bụla, mkparịta ụka izizi, UCOC na mkparịta ụka ọ bụla anyị nwere iji mejuputa atumatu 2030. Nke a gụnyere inye aka n'ịmepụta usoro nbibi maka MCDC.
Summit sub-committee Anọ m na-arụsi ọrụ ike na mmegharị obodo kemgbe 2004, ma jee ozi dị ka onye nchịkwa na Wikipedia Bekee na Meta-Wiki, yana na mbụ na Commons.
A na m arụsi ọrụ ike n'otu ndị a haziri ahazi, n'etiti ndị ọzọ:
Wikimedia New York City, Onye isi guzobere 2009-2017, onye ode akwụkwọ ugbu a
Wiki Education Foundation, onye otu bọọdụ kemgbe 2013
Art+Feminism User Group, akụkụ nke otu mbụ na 2014, onye nnọchi anya mpaghara ugbu a
Na nzaghachi esemokwu njiri mara nke afọ gara aga, mụ na ndị ọzọ nyere aka hazie atụmatụ ndị a:
Ogbe oghe leta na ngbanwe aha (COLOR), nke ndị mmekọ 73 na mmadụ 1001 bịnyere aka na ya
Runa Bhattacharjee (Runab WMF) Enwere m ọrụ nkeonwe na nke ọkachamara n'ime mmegharị Wikimedia. N'ime ikike nkeonwe m bụ onye ntinye aka na Bangla Wikipedia ma Wikipedia Bekee, na Commons. N'ime ọrụ ọkachamara m, ana m arụ ọrụ na Wikimedia Foundation na-enye ndị otu atụmatụ asaa nkwado ọrụ dịka onye isi na ngalaba ngwaahịa.
N'oge dị iche iche, esonyere m na mmemme ndị otụ ma ọ bụ ngalaba ngwaahịa mere maka atụmatụ ngwaahịa. Otu ihe atụ pụtara ìhè bụ ntinye m na mmepe, mmezi, na mgbasa ozi nke Content Translation tool sitere na otụ asụsụ WMF.
Oge ịbụ onye otu
Alice Wiegand (Lyzzy) Nọvemba 2021-Janụwari 2022 M malitere na 2004 dị ka onye nchịkọta akụkọ na German Wikipedia. E wezụga ndezi, abụ m onye nchịkwa, onye isi ala, onye nnọchi anya OTRS na ndị ọzọ. Ná mmalite, achọpụtara m na ọ bụ ihe karịrị ide akụkọ. M sonyeere Bọọdụ nke Wikimedia Deutschland (WMDE) site na 2008 rụọ 2011 ma bụrụ onye otu Wikimedia Foundation Bọọdụ site na 2012 rụọ 2018.
Ugbu a, abụ m onye isi oche nke Wikimedia Deutschland ọzọ. N'oge mmepe nke atụmatụ 2030, abụ m onye otu Movement Strategy Working Group Advocacy. Anọ m na-agbaso Strategy Movement nke ọma kemgbe ahụ.
Ụdị ibe a gara aga (a na-eji n'oge ntuli aka).
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Movement_Charter/Drafting_Committee/ig&oldid=23442334"